सुत्केरी हुने दिन अपहरण, गुण्डाले पेट काटेर बच्चा निकाले, मेडिकल जाँचमा उड्यो होस, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
सुत्केरी हुने दिन अपहरण, गुण्डाले पेट काटेर बच्चा निकाले, मेडिकल जाँचमा उड्यो होस
डिसी नेपाल , १४ आश्विन २०७५
एजेन्सी। कोलम्बियामा एउटा निकै आश्चर्यजनक घटना भयो । यहाँकी एक महिलाको गर्भ रहेको ९ महिना पुगेपछि बच्चा जन्मिने दिन नै अपहरण भयो । त्यसपछि अपहरणकारीहरुले पेट काटेर बच्चा निकाले । यो सबै कुरा ती महिलाले सुनाएका मनगढन्ते कुराहरु हुन् । तर ती महिलाले यिनै मनगढन्ते कुराले आफ्ना ब्वाइफ्रेण्ड र उनको पूरै परिवारलाई कति मजाले झुक्याइन् भन्ने कुरा निकै आश्चर्यजनक छ ।
ती महिलाले सुरुमा आफ्ना ब्वाइफ्रेण्डलाई आफू गर्भवती भएको बताइन् । तर, ९ महिना पूरा भएपछि बच्चा जन्मिने दिन अचानक ती महिलाको अपहरण भयो । पछि भेटिएकी महिलाले भनिन् कि अपहरण गर्ने गुण्डाहरुले उनको पेट काटेर बच्चा निकाले । पेट काटेको भनेर झुट बोल्नु उनको लागि निकै भारी पर्यो । मेडिकल टेस्टमा यस्तो केही पनि देखिएन जसले यो कुरा सत्य सावित होस् कि महिला गर्भवती थइन् र उनको पेट काटिएको थियो । यो सबै उनले यसकारण गरेकी थिइन् कि उनका ब्वाइफ्रेण्ड उनलाई छोडेर नजाउन् ।
ब्रेंक्विलाकी एन्टोनेला मिलेनालाई आफ्ना ब्वाइफ्रेण्ड भिक्टरलाई गुमाउनुपर्छ कि भन्ने डरले सताइरहनथ्यो । यही कारण उनले ब्वाइफ्रेण्डलाई नगुमाउन एउटा लामो नाटक रचिन् । मिलेनाले पहिले भिक्टरलाई आफू गर्भवती भएको झुटो खबर दिइन् । त्यसपछि उनको यो नाटक पूरै ९ महिनासम्म चलिरह्यो । यस क्रममा उनले गर्भावस्थाका बेला हुने समस्याको पनि नाटक गरिन् । मिलेना दिनहुँजसो उल्टी हुने चक्कर लाग्ने जस्ता शिकायत गरिरहन्थिन् । यसका अलावा उनी अमिलो पिरो खानेकुरा खान मागिरहन्थिन् ताकि कसैलाई शंका नहोस् ।
भिक्टरलाई केही गडबडी भएको पनि लागेको थिएन । सबथोक सामान्य चलिरहेको थियो । उनी जीवनमा पहिलोपटक पिता बन्दै थिए र उनी निकै उत्साहित थिए । ९ महिना यो नाटक चलिरह्यो । जब सुत्केरी हुने दिन आयो मिलेनाले भिक्टरलाई ११ बजे निश्चित ठाउँमा आफूलाई लिन आउन भनिन् ताकि उनीहरु अस्पताल जान सकुन् । भिक्टर लिन गए तर मिलेना त्यहाँ थिइनन् । त्यसपछि उनले आफ्नो अपहरणको कहानी रचिन् । उनले भनिन् कि मानव अंग तस्करीको धन्दा गर्ने गिरोहले उनको बाटोबाटै अपहरण गर्यो र उनको पेट काटेर बच्चा निकाल्यो ।
मिलेनाले भनिन् त्यसपछि ग्याङले उनलाई कोर्डियालीदाद पुलमा लगेर छोडिदिए । यहाँ उनी एक अन्जान व्यक्तिको सहयोग लिएर आफूसँगै काम गर्ने साथीको घर पुगिन् । त्यहाँबाट चर्च पुगेर भिक्टरलाई खबर गरिन् । मिलेनाले आफू हराएको १२ घण्टापछि भिक्टरलाई आफ्नो मद्दतका लागि बोलाइन् र यो पूरै कहानी सुनाइन् । त्यसपछि भिक्टरले तुरुन्तै यसबारे प्रहरीलाई खबर गरे ।
तर, पेट काटिएको कुरा भन्नु मिलेनाको लागि निकै भारी पर्यो । ब्वाइफ्रेण्डको दबाबमा उनी अस्पताल जानु परेपछि सबै झुटको पोल खुल्यो । डाक्टरले परीक्षणपछि प्रस्ट भने कि न त उनी कुनै चक्कुको चोटको सामना गरिरहेकी छिन् त उनी बितेका दिनमा गर्भवती थिइन् । उता उजुरी परेपछि अनुसन्धान थालेको प्रहरीले उनीमाथि सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको अभियोग लगाइ कारवाही अगाडि बढाएको छ । अर्कोतर्फ झुटो कहानी खुलेपछि भिक्टरले पनि मिलेनासँग नाता तोडेका छन् ।